Daawo:"I Amaahiya dhegihiina" Waa Fariimo Taxana ah oo uu jeedinayo Maxbus British ah oo ku jira Gacanta Dowladda Islaamka.
Hoggaanka Xarakada Al-Shabaab oo Farriin Gacaltooyo u diray Bulshada Waqooyi Bari Kenyana uJeediyay digniin culus [Dhageyso].
Xoogaga Mucaaradka oo dib ula wareegay degmooyin dhaca Waqooyiga Suuriya.
'Beesha Caalamka' oo Farmaajo iyo Kheyre uga digtay waqti kororsi.
Cudurka Carona oo ka dilaacay saldhigga ciidanka Mareykanka ee Koonfurta Kuuriya.
Saturday September 20, 2014 - 08:43:05 in Wararka by Super Admin
Mu'assasada Al-Furqaan garabka Warbaahineed ee Dowladda Islaamiga ayaa Todobaadkan baahisey Fariimo Taxane noqon doona,kuwaas oo uu jeedinayo Maxabuus British ah oo gacanta ugu jira Mujaahidiinta.
John Kanatli ayaa ah Saxafi British ah,wuxuuna jeedin doonaa Silsilado Fariimo ah oo loogu magac darey I amaahiya Maqalkiina ,waxa uu kusoo bandhigi doona Xaqaa’iq qarsoon iy Dhaqanada foosha xun ee Xukuumadiisu ku caan baxdey.
Isagoo wata Dharka ay qaataan Maxaabiista Muslimiinta Guwantanamo bey ku xiran ayuu Bilaabey sheekadiisa wuxuna yiri..
"Marxaban Magaceyga waxaa la yirahadaa John Kantali,waxan ahay Wariye Brtissh ah,waxan u shaqeyn jirey Jaraa’id kasoo baxa Ingiriiska,Sun Times,Sun,Telgraph.
Novembar 2012 ayaan imidi Suuriya,kadibna waxaa i afduubtey dowladda Islaamiga ah,laba sano kadib waxa badn ayaa is bedeley,waxana kamid ah isbalaarint Dowladda Islaamiga ah,si ay u qabsato Barigas Suuriya iyo Galbeedka Ciraaq,Masaaxa ka weyn Brtin iyo dowlado kale.
waan ogaha waxad ku fakari doontaan,waxad dhihi doontaan waxa uu shaqadan u samenayaa waa Maxbuusnimada darted,ama Qori aya madaxa looga hayaa,oo waa la qasbey,waa Run dhabtii haa waxan ahay Maxbuus,mana inkiri karo taas.
markii ay Xukuumadeyda arintedya isaga baxdey,Nolosheydana ay gashey gacanta dowladda Islaamiga ah,waxba ma khasaari doono,macquul inaan noolaado ama la i dilo,lkn waxan donayaa inaan fursadan uga faa’ideysto inaa gaarsiyo Xaqaa’iqd qaar ee aad dareemi kartan,waa Xaqiiqooyin haddii aad ku tadaburtaan aad bad baadin kartaan Arwaax badan.
Xalaqaadka yar ee soo socda waxan idin kugu soo bandhigi doona Xaqiiqooyin ay isku dayayaan Iclaamka Reer Galbeedka inuu ka rido Shacabkiisa dagaal ka dhan ah dowladda Islaamiga ah.
Loolan dheer oo adag kadib oo Afgaanistaan iyo Ciraaq ah,maxay Xukumadaha Reer Galbeedku u muujinayaa Iney u xamaasadeysan yihiin Loolan kale oo ka khasare badan?.
Xaqiiqdii waad arki doontaa,iyo Manhajka iyo Hadafka Dowladda Islaamiga ah,iyo sida uu u qaloocinayo Iclaamka Reer Galbeedka,uuna ugu cayaarayo Xaqiiqda,si ay u saameeyaan Jamaahiirtooda.
Sheeko kasta waxay leedhay laba dhinac,ma u maleysaa inaad aragto Sawirka oo dhameystiran.
Xaqiqda waxad maqli doontaa marka la afduubto Muwaadiniin Yurub ah,kadibna ay sii deyso Dowladda Islamiga ah,iyo sida ay u maleeyaan Xukumadaha Mareykanka io Ingiriiska iney sameyn karaan wax ka gedisn waxay sameeyeen dowladaha Yurub.
Xukuumadah Yurb waxay la hadleen Dowladda Islamaiga ah si loo sii daayo dakooda,hlka Mareykanka iyo Ingiriiska laga tagay iyagoo kaligood ah.
waxaaa la yab leh sid ay wax u dhacayaa,Waxadba moodaa in Tariikhdu dib isku so celiso.
wali waxaa furan majaal lagu bedeli karo Sida ay dhacdooyinku u socdaan,inkastoo aad moodo iney go’aan tahay,lakiin kaliya hadii aad dhaqaaqdan idinka Shucuubta ah.
igala qeyb gal Xalqadaha soo scoda ee yar yar,waxaana lama filaan idinku noqon doona waxad sameysaan.
Hoos Ka Daawo Filimka.
Cali Mahdi Max'med "Dowladda Soomaaliya ka jirta waxaa leh Federaalka Itoobiya" Video.